Farqiga udhaxeeya shaashadaha awooda iyo kuwa diidmada ah | Androidsis
ANDROID WAA LACAG LA'AAN AMA DIID
Maanta waxaan isku dayeynaa inaan sharraxno farqiga u dhexeeya haysashada qalab shaashadda capacitive o resistive. Oo shaashaduhu isku mid ma aha? Hagaag, ma noqonayso. Markii ay soo ifbaxday aalado ay xukumaan OSX ama Android, Noocyada shaashadaha ee illaa hadda loo isticmaalo aaladaha taabashada waa in la beddelo.
Kahor iphone aaladaha taabashada badankood Windows Mobile waxayna ahayd lagama maarmaan stylus ama stylus ama waxkastoo aad rabto inaad u wacdo, si aad u awoodo inaad telefoonka adeegsato. Marka laga soo tago xaqiiqda ah in nidaamka laftiisa uusan diyaar u ahayn in lagu isticmaalo faraha maadaama menuyaashu ay yaraayeen, qaabeynta shaashadda ee xulashooyinka ayaa hor istaagtay isticmaalka farta si loo fuliyo waxaana jira howlo badan oo aan ka ahayn caarada qalinka laguma ordi karo.
Laakiin xitaa haddii aan dhaqaajinno a nidaamka hawlgalka noocee ah Android, aalad sida kuwii hore oo kale, isticmaalkeeda faraha, in kastoo ay macquul tahay, ma noqon doonto mid dareera oo siman sida ay ku jirto taleefannada loogu talagalay. Tanina waa maxay sababta? Sababta oo ah farqiga u dhexeeya shaashado karti iyo diidmo leh.
Telefoonada sida HTC Dream o Sixirka Htc ama qof kasta oo la yimaada Android, way yeelan doonaan shaashadaha capacitive; qalabka leh Windows Mobile rakibay, ilaa hadda, waxay leeyihiin shaashadaha iska caabin ah.
Farqiga udhaxeeya labadooda waa sida soo socota.
1 Shaashado iska caabin ah
2 Shaashadaha Capacitive
Shaashado iska caabin ah
Una shaashadda taabashada resisis Waxay ka kooban tahay dhowr lakab. Tan ugu muhiimsani waa laba lakab oo khafiif ah oo walxaha wax lagu kala qaado ah oo u dhexeeya farqi yar. Markuu shay taabto dusha sare ee lakabka kore, labada lakab ee wax tabinta waxay ku xirmayaan meel cayiman. Tani waxay soo saartaa isbeddel ku yimaadda korantada oo u oggolaanaysa koontaroole inuu xisaabiyo booska barta shaashadda taabatay iyadoo la cabirayo iska caabin. Shaashadaha qaarkood ayaa cabbiri kara, marka laga reebo isku-duwayaasha xiriirka, cadaadiska lagu saaray.
ka shaashado taabasho diidan guud ahaan waa kuwo la awoodi karo laakiin waxay luminayaan qiyaastii 25% dhalaal ahaan sababtoo ah jaakadaha badan ee loo baahan yahay. Cillad kale oo ay qabaan ayaa ah inay ku dhaawici karaan walxaha fiiqan. Taas bedelkeeda, ma saameynayaan walxaha dibadda sida boodhka ama biyaha, waana sababta ay nooca u yihiin muraayadaha taabashada inta badan la isticmaalo maanta.
Una shaashadda taabashada awood leh waxaa lagu daboolayaa maaddo, badanaa indium tin oxide oo sameeya koronto joogto ah iyada oo loo marayo dareeraha. Dareemuhu wuxuu markaa muujinayaa goob elektaroonig ah oo si sax ah loo kontaroolay labada faasas qotoma iyo mid toosanba, taas oo ah, inuu helo awood. Jirka bani'aadamka sidoo kale waxaa loo qaadan karaa aalad koronto oo ay ku jiraan koronto, sidaas darteed sidoo kale wuxuu leeyahay awood. Marka aagga awoodda wax-qabadka ee dareeraha (xaaladdiisa tixraac) ay bedesho goob kale oo awood-karis ah, sida farta qofka, wareegyada elektaroonigga ah ee gees kasta oo shaashadda ka mid ah waxay cabirtaa 'dhalanrog' ka dhashay mowjadda. Macluumaadka ku saabsan dhacdadan oo ku socota kontoroolka xisaabinta xisaabeed. Dareemayaasha Capacitive waa in lagu taabtaa aaladda tabinta tooska ula taabashada gacanta ama farta, taas oo aan ka duwanayn dareemayaasha awoodda leh. shaashadaha iska caabin ah ama mawjadaha dusha sare ee shay kasta loo isticmaali karo. The shaashadda taabashada capacitive Wax saameyn ah kuma lahan walxaha dibedda waxayna leeyihiin hufnaan sare, laakiin ka shaqeynta calaamadaha murugsan waxay ka dhigeysaa qiimahooda mid sareeya.
Sidaad ku arki karto qiyaas ahaan shaashadaha iska caabin ah waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo cadaadis cayiman, farta ama shayga, si amarka loo fuliyo, bedelkeed awood leh kaliya adigoo fartaada gelinaya aaladda elektarooniga ah ee shaashadda ah, waxaad helaysaa dalabka.
Dakhliga ka soo shaashadaha capacitive waa inaysan ku shaqeynin walxaha sida qalin ama waxyaabo la mid ah, waa inay noqotaa farta mana u qalantaa in gacmo gashi la xirto, marka jiilaalka si looga saaro si loo waco taleefan. Loogu soo horjeedo shaashadaha iska caabin ah haddii ay ku shaqeeyaan shey laakiin ay u adeegsadaan aaladaha taabashada, waxay u baahan yihiin habsami u socodsiinta iyo xawaaraha fulinta.
Waxaan rajeynayaa inaanan ku caajisin.
XIGASHO | www.wikipedia.org
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » ANDROID WAA LACAG LA'AAN AMA DIID
140 faallooyin, ka tag taada
Ma caajiso gabi ahaanba. Maqaal aad u fiican oo si fiican u sharaxay farqiga u dhexeeya noocyada shaashadda.
Ku rakibida Android mobilka aan laheyn sida caadiga shaki kuma jiro waligiis inuu la mid noqdo iibsashada mid horey loogu sii diyaariyay.
Mahadsanid Nacho. Waxaan u maleynayaa sidaada oo kale in nidaam sida android ah oo aan laheyn shaashad awood leh aysan isku mid aheyn. Markaan helo waqti waxaan rabaa inaan ku rakibo omnia si aan u arko sida ay wax u socdaan.
Maqaal aad u wanaagsan. Waan jeclaa.
Ku jawaab IKER
Mahadsanid. Mararka qaarkood si fiican ayey u shaqeysaa marna ka sii xumaataa.
DR garaac dijo
Maqaal aad u fiican ... shaki ayaad iga saartay (qaar badan). Waxaan ka labalabeyn jiray inta udhaxeysa laba taleefano gacmeed oo wanaagsan: Omnia II i8000 iyo Omnia HD i8910 laakiin waxaan u socdaa HD anigoo rajeynaya inay tahay doorasho wanaagsan ... Mahadsanid qoraalka, waxay iga dhigtay inaan sida ugu fiican ugu socdo
Ku jawaab DR BEAT
Sharaxaad aad u wanaagsan, runta ayaa luntay mawduucan
oo aad si cad ugu sharaxday ..
Hambalyo waadna ku mahadsan tahay sharraxaad aad na siisay.
Ku soo jawaab Nosferatu
Mahadsanid, sharraxaadda ayaa aad u caddaysay in muddo ah oo aan shaki ka qabay shaashadaha, aad baad u mahadsan tahay
aad u wanaagsan oo aan caajis lahayn, sidoo kale si fiican ayaa loo fahmay, looma baahna in la fahmo waxa aad leedahay, horayba waad u sameysay si aad u wanaagsan
Ku jawaab ikarios
Waad ku mahadsan tahay inaad si hufan oo faahfaahsan u sharaxday faraqa u dhexeeya labada nooc ee shaashadaha. Waxay ii ahayd caawimaad weyn. Dhamaan wanaag
tabaruc weyn oo si fiican loo sharaxay, aniga uguyaraan, igama caajisin. =)
Ku jawaab davevo
jeex jeexan, laakiin labada kee kee adkaysi badan?
LIZ ADRIANA dijo
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa Samsung gt5230 TACTILE, biyo ayaan ku dhex shubay xoogaa ilbiriqsiyo ah, isla markiiba waan la soo baxay oo waan qalajiyey, batteriga iyo jibarka ayaan ka saaray oo sidaa ayaan ku daayay habeenki, laakiin subaxa dambe markaan shido caadi ahaan, shaashadda taabashadu ma soo jawaabto, waxaan rabaa in aan caddeeyo q shaashadda ma muujineyso nabarro iyo raadad waxyeello ah, kaliya kama soo jawaabeyso marka la doonayo in la isticmaalo howlaha (isha ayaa heleysa wicitaannada waxayna si caadi ah u heshaa farriimaha)
Jawaab LIZ ADRIANA
Waxaan ubaahanahay taleefan gacmeed, kaygii ayaa burburay oo aniga lama xiriiri karo
Ka jawaab cuntada
Alfredo Avila dijo
eeh! ma caajiso! macluumaad aad u wanaagsan, kuwani waa waxyaabaha aan ku xisaabtamayo taleefankayga gacanta ee soo socda!
macluumaad aad u wanaagsan!
Jawaab Alfredo Avila
Maqaal aad u wanaagsan runtii, waa macluumaad aad u wanaagsan oo faahfaahsan oo dheeri ah, waxaa la dhihi karaa shaashadaha taabashada capacitive-ka ayaa ku shaqeyn kara dhaqdhaqaaqyo fara badan oo taabasho ah
Aragtidayda waxaan doorbidaa shaashadda nooca diidmada leh.
Guriga waxaan ku leenahay 2 terminaal, shaashad taabasho capacitive ah, (Samsung Onix), waxaan haystaa Nokia C5-05 oo leh shaashad diidan.
Ma qadarinayo, ama muhiimad ma siinayo tayada fiidiyowga ee yaraatay ee shaashadda diidmada leh, laakiin waxaan ku qanacsanahay qallafsanaanta qabashada kontaroolada kala duwan ee Samsung, maadaama aan la isticmaali karin qalin.
Marka marka la soo koobo, moobilku waa waxa loogu talagalay, haddii aan rabno inaan filim aragno, maxaa ka fiican shineemo.
Tan waxaan ku dhahayaa ma ahan inay jiraan dad dalbanaya tayada muuqaalka, waxaan kaliya u sheegayaa in feker shaqsi ahaaneed, waxaan doorbidi lahaa shaashad iska caabin ah labada terminaal.
Faa'iidada kaliya ee weyn ee karti u leh kan diidmada leh ayaa ah in nokia resistive waligiis la ii furay kaliya jeebkeyga, taas oo ku jirta awoodda samsun aan macquul aheyn, laakiin sidaas oo ay tahay, waxaan door bidaa diidmada
duudduuban 21 dijo
aad u dhameystiran oo sharaxaad leh.
Way cadahay in kuwa awoodda leh ay kafiican yihiin inay ku qaataan jeebkaaga oo ha wicin wicitaanada darteed
Ku jawaab xaalufin21
Waxa kale oo jira tilmaameyaal shaashadaha awoodda leh, oo u shaqeeya dhibaato la'aan shaashadda noocan ah. Runtu waxay tahay in xasaasiyadda sare ee shaashadda karti-qabka la qiimeeyo, waxay kugu addeecaysaa taabashada fudud ee farta.
Wanaagsan, laakiin qof kastaa wuxuu doortaa waxa uu ugu jecel yahay, waxayna ku habboon tahay miisaaniyaddooda.
si fiican loo sharaxay! baloogyada kale waxay dhigaan "kab" dheeraad ah waxayna yiraahdaan wax intaa ka yar!
Hambalyo Sharaxaad aad u wanaagsan.
Awoodda 1099 dijo
Sharaxaadda waa mid aad u wanaagsan, aad baad u mahadsan tahay
Aad ayaan u fiicanahay waxaan ahay dameer badh laakiin waan fahmay ha ha. Si aad u wanaagsan ayaa loo sharaxay, salaan ...
Ku jawaab Luks
Sharaxaad molt ben feta. Duugga.
Jose Aristi dijo
Aad u fiican, waad ku mahadsan tahay sharraxaadda!
Jawaab Josue Aristy
Waa sidaad u sharraxday, waxaan hayaa laba taleefan, mid diidmo leh iyo mid kale oo awood leh, waayo maydhashada ama qorista faraha ayaa si aad u fiican u dhaawacmay taleefannada gacanta ee shaashadda
mahadsanid, macluumaad aad ufiican ...
Yeison Ivan dijo
mahadsanid ,, sharaxaad fiican
Ku jawaab Yeison Ivan
Wax Soo Saarka Jyv dijo
Runtu waa sharraxaad aad u wanaagsan, haddii laba jibbaar sidayda oo kale u fahantay haha, aad baad u mahadsan tahay
Jawaab Jyv Multiproductos
Sharaxaad qumman oo cad
Ku jawaab Wilndev
xitaa biyaha ma cada ... sharaxaad wanaagsan
ma mobeel baa ii yimid oo igu yidhi wuxuu wataa shaashad karti leh, wax fikrad ahna kama haysto waxa uu ahaa ilaa imika, runta ayaa ah inaan si fiican u fahmay, mahadsanid
Ku jawaab pabloide
Maqaal wanaagsan, laakiin dhankeyga, waxaan haystaa Galaxy Mini oo leh karti iyo Nokia N97 Mini oo leh wax diidmo leh, marka laga hadlayo Galaxy-ga farahaaga gaar ahaan internet-ka waxaad wax ka taabanaysaa halkii aad ka dooni lahayd, iyo liddi Nokia-ka (oo loo isticmaali karo qalin la'aan ama qalin la'aan, iyo dabcan farahaaga) marka fiidiyowga la arko, ma dareemin wax dhimis iftiin ah, inkasta oo Galaxy-gu uu yahay mid isku-dhafan (maadaama uu aqbalo tilmaamyo leh labo farood sawirada) Waxaan doorbidayaa Nokia, in kasta oo wax la riixi karo, hadana ma sahlana in la furo hadii aysan aheyn iyadoo la dhaqaajinayo batoonka dhinaca, (Galaxy sidoo kale lama furi karo sidoo kale), waa wax laga xumaado inay jiraan qalin ma leh shaashadda noocaas ah ee horeyba wax badan u soo xaroon lahayd, ugu yaraan isticmaalka internetka.
wax caajis ah, aad u xiiso badan, waxaas oo dhami waxay ka yimaadeen isla kaftanka ah beddelashada moobiilka iyo iibinta ipad, maxaa yeelay waxaa jira xoogaa ka jaban laakiin leh shaashad diidmo leh ... markaa waxaan la yaabanahay arrintan, haddii kale, wuu sii wadan lahaa nolosha isagoo aan ogeyn waxa waxay ahaayeen ... mahadsanid
Sharaxaad wanaagsan! Horey ayaan u aqriyay qoraalkanaga, laakiin waan ilaaway faahfaahinta sidaa darteed waan soo noqday markalena waxaan si cad uheystaa wax walba
Aad baan uga helay adiguna ima aadan caajin 😉
Ku jawaab Elodiobbox
Anais Pérez Mena dijo
Waad ku mahadsan tahay, waa sharaxaadii aan raadinayay, mid fudud oo cadeyn ah. Habsiin 🙂
Jawaab Anaís Pérez Mena
aad u cad oo la taaban karo, waxaan kuugu mahadcelinayaa luqadda fudud ee faallooyinka, waxaan u arkaa in qof walbaa fahmay. Macallin wanaagsan
sharaxaad fiican oo cad, waan kugu hambalyeynayaa !!!!
Ku jawaab Angltg
Frankrojas 82 dijo
tabaruc aad u wanaagsan, wax badan ayey i caawisay.
Ku jawaab Frankrojas82
Mahadsanid, shaki badan baan ka qabtay tan!
Waad salaaman tahay, waxay ila ahayd aniga macluumaadka ugu fiican uguna cad ee cadeeyay shakigayga ku saabsan farqiga u dhexeeya waxa karti iyo diidmo leh. Waxaan rumeysanahay in awoodda ay ku xiran tahay awood iyo adkeysi diidmo. Mahadsanid !!
fayl aad ufiican macluumaad aad ufiican tixraacyada iyo qeexitaanadooda iyo sharaxaadooda oo dhameystiran mahadsanid
Sharaxaad aad u wanaagsan, waxaan ka shakiyay kala duwanaanshaha waxayna igu noqotay wax aad ii cad, aad baad u mahadsantahay.
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, way fiicantahay in dad kula mid ah aduunka aad ka barato wixii su'aalo ah ee aan qabno.
Cesh 16 dijo
Ka qayb qaadasho wanaagsan ayaan bartay faraqa 😉
Markaa ugu dambayntii waxaan haystaa su'aal, waxaan haystaa asus tf300t transformer, waxaanan jecelahay inaan wax ku sawiro, markaa ma jiro aalad u eg qalin qalin oo aan ku isticmaali karo kiniinka? ... mahadsanid
Ku jawaab Ccmmasi
Waxaad u adeegsan kartaa istiktikada wax lagu dhejiyo ee sharaxaadda iyo adeegsiga caqli ahaan waxaan qiyaasayaa in waxa ay sameyneyso ay tahay fulinta tamarta korantada ee jirkeena ilaa cirifka stylus si shaashadda loo ogaado.
run maahan waxaan haystaa alcatel ot890 waxayna leedahay android laakiin maahan shaashad capacitive waa iska caabin
Ku jawaab El abron
Ysita 305 dijo
ohh, xiiso leh, ayaa iga soo saartay yaamayska, mahadsanid!
Aad ayaan u cadeeyay, mahadsanid
Mahadsanid aad u fiican
Obama Nuug dijo
sharaxaad sax ah laakiin erey cabsi leh.
Jawaab Obama Nuug
Wax ku darsasho aad u wanaagsan. Waxaan horeyba uga xiiso yar ahay farqiga u dhexeeya iyo adeegga labada xaaladood!
Ku jawaab Musiarte
Ku jawaab Mpaolillo
Doc Frio 1977sergio dijo
Xogtu way cadahay shakigaygana waa la cadeeyay.
Jawaab Doc Frio1977sergio
shaki badan oo la cadeeyay, mahadsanid, wax ku biir wanaagsan !!
FAHAN AAD U BADAN FAHAN ..... Waxaan ka saarey shaki ku saabsan waxa laga gato taleefanada wicitaanada
Sharaxaad wanaagsan, Mahadsanid!
Ku jawaab Alexpoten
Sharaxaad aad u fiican, kudhowaad ulo iyo kubbado, tani waa sida aan jecelnahay inaan u helno macluumaad, mowduucyada inta badan jahwareerka u leh adeegsadayaasha badankood ... aad baad u mahadsantahay
Aad baad u mahadsantahay ... wax walboo sifiican loo cadeeyay
Ku jawaab mahc01
mahadsanid, sharaxaadaada sifiican u fahmi karto! salu2 oo ka yimid Mexico, df
Ku soo jawaab Supportfinancomp
Aad baad u mahadsan tahay, tabarucaadkaagu aad buu u cad yahay
inbadan fahmid, mahadsanid
Samuel Papa Happy Embriz dijo
sharaxaad aad u wanaagsan waxaad mudan tahay 10 ... mahadsanid.
Jawaab ku bixi Samuel Papa Feliz Embriz
Lobsang Ramp dijo
fahmay oo dhaliyay
Jawaab Lobsang Rampa
Aad u fiican, waxaan doorbidaa awoodda
Sharaxaad aad u wanaagsan, WAAD MAHADSAN TAHAY ... 🙂
Ku jawaab Camucha
MANUELA RODRIGUEZ dijo
AAD BAAD U MAHADSAN TAHAY IN AAD U BAAHAN TAHAY FAHANTAADA
Ku soo jawaab ManUELA RODRIGUEZ
Aad baad ugu mahadsantahay sharraxaadda, mudane.
Aad baad u mahadsantahay saaxiib, sharaxaaddaadu aad bay u cadahay, mahadsanid!
aad u cad mahadsanid
AAD U FIICAN 🙂
Ku jawaab Ml_232
Leonardo Alcantar dijo
ma awoodid, heer sare
Jawaab Leonardo Alcántar
Waxaan u maleynayay in shaashadeyda aysan shaqeyn maxaa yeelay mararka qaar waxaan ku dhibtoodaa bogaga qaar, maahan dhamaantood, taasi waa waxa iga dhigay wax lala yaabo, laakiin sharraxaadan markii horeba way igu cadahay, shaashadaydu waa mid diidmo leh
HAMBALYO AAD BAAD UGU MAHADSAN TAHAY FAHANKAAGA
waad i caajisay ¬¬
Ku jawaab Tumamita
Ps waad fiicantahay b ... macluumaadku wuu cadyahay qof walbana wuu fahmayaa. Maaha inaan ku maaweeliyo ee waa inaan ku ogeysiiyo
Macluumaad weyn, ayaa qeexay iibsigayga taleefanka gacanta
Maxaa qalad ah, dhammaan taxanaha vampire-ka waxay adeegsadaan iphone iyo Samsung Galaxys, laakiin haddii ay dhintaan oo aysan faraha ku hayn fiilo koronto, waa inaysan u shaqeyn iyaga. Waad ku mahadsan tahay maqaalka, aad u xiiso badan.
Irving Casas dijo
hahaha, u fiirsasho wanaagsan
Ku jawaab Irving Casas
ha ha ha mid kale oo aan loo arkin filimkan ha ha
Waan fahmay sifiican, faafaahin aad ufiican, mahadsanid !!
Ku jawaab bryan
EDayaanna ® dijo
Cad, biyona maaha…. waad ku mahadsantahay cadeynta ..
Waad ku mahadsantahay sharaxaadda. Dhab ahaantii inkastoo ay adag tahay xagga shuruudaha qaarkood, si saraaxad leh ayaa loo sharaxay. a 10
heer sare ah oo cad macalin weyn shaki la'aan.
Waxaan iibsaday kaniiniga sznenio 1207c4 way fiicantahay waa in aanan fahmin inay u tahay caruurtayda 8 iyo 12 sano
Si aad u wanaagsan ayaa loo sharaxay, si cad oo fudud, markaa yaa fahmi waaya.
Jawaab Pedro Leal
Caddayn heer sare ah oo ku saabsan kala duwanaanshaha heer kulkan
loogu talagalay dadka had iyo jeer raadinaya cusbooneysiinta arrimaha internetka. Waad ku mahadsantahay Venezuela
Aad baad u mahadsan tihiin, aniga ahaan waxay ii ahayd wax iska cad ... resistively capacitive haha. 😉
wax ku biirinta cajiibka ah si aad u wanaagsan ayaa loo sharaxay mahadsanid waqtigaaga
Ku jawaab kinghoramas
Luzero Montel dijo
Mahadsanid, waa iska cadahay, hada waan fahmay sida unuggaygii hore u shaqeeyo, hahaha 😉
Jawaab Luzero Montiel
Masiixiyiinta 1000 dijo
Ma jiraan wax caajis ah iyo sharraxaad wanaagsan ayaa hadda iga caawinaysa taas oo igu dhiirrigelineysa inaan iibsado kiniin.
Jawaab TheAntichrist 1000
Antonio Briones dijo
Kuwa yidhi "wuu caajistay" hubaal waxay halkan ugu dhaceen si qalad ah. Sharaxaad wanaagsan. Mahadsanid kun.
Jawaab Antonio Briones
shaqo wanaagsan. mahadsanid iyo bogaadin
Marcos Soncco dijo
Jawaab ku bixi Marcos Soncco
si fiican u sharaxay, mahadsanid
Aad u fiican oo aad u cad. Mahadsanid!
Waad ku mahadsantahay wadaagida aqoontaada.
sony ericsson xperia 8 labadaba wuu leeyahay, kaniiniyada qaar labadaba ma lahan, cabirku miyey muhiim tahay?
Ku jawaab kivi
super gaar ah dijo
Hore ayaan ugu hubiyay wiki laakiin way ka cadahay halkan
Ku soo jawaab superunico
Miyaan u isticmaali karaa shay shaashadayda wax qabadka? Mid baan hayaa, laakiin way yar tahay, fartayduna way ka weyn tahay saxnaanta. Iima aysan shaqeyn aniga oo leh qalin shaashad taabasho leh: /
Kun laakiin kun mahadsanid iyo bogaadin sharaxaadaada si cad.
Waxaad cadeysay dhamaan shakigeyga
Haye, waa maxay saaxiib xad dhaaf ah, waad ku mahadsan tahay sharraxaadda waxaan awoodi doonaa inaan ku tijaabiyo asxaabteyda sharraxaadda sababta shaashadda iphone ay u dareemeyso inay ka fiicantahay miisaska hore qaarkood.
Ku jawaab nestoroski
cadeeyay dhamaan shakigeyga !!
Cristian Sojimra dijo
hello dhawaan kiniinkeyga oo leh shaashad capacitive 5.3 ah ayaan ku dhacay taas oo soo saartay waxyeelo sawirka waa mid cakiran oo hal gees ah waxaan hayaa khad cad laakiin taabashada ayaa wali shaqeyneysa sida caadiga ah waxay iga caawin kartaa inaan helo waxa qaladka noqon lahaa .. waan noqon doonaa aad baan ugu mahadcelinayaa
Jawaab ku sii Cristhian Sojimra
Maqaal heer sare ah.
Ku jawaab Lebrera
sharaxaad aad u fiican, waan kugu hambalyeynayaa.
Sharaxaad aad ufiican, cad oo kooban. Estoooo .. miyaanad helin sharraxaad ku saabsan asalka koonku halkaas? Mahadsanid!
Ku jawaab Brazpit
In kasta oo khaladaadka higgaadinta ah ... haddana fikradda wali waa la fahmay MAHADSANID MACLUUMAADKA, CAD INAAD HESHO.
Aad u faa'iido badan, aad baad u mahadsan tahay ...
Sawirka Gustavo Sanchez dijo
mahadsanid wax walba way iska cadahay hada waan fahmay sababta dhowr shirkadood u tixraacaan shaashadahooda !!!
Jawaab Gustavo Sanchez
macluumaad aad u fiican oo cad, aad ayaad u mahadsan tahay ...
Sharaxaad wanaagsan ee mawduuca, mahadsanid dadka adiga oo kale ah, aqoon ayaa la helay.
Runta sharraxaad noocan ah ay raadineysay! Aad u cad… Waad ku mahadsantahay warbixinta! Salaan
Rocio Galan Pazos dijo
Waxaan aakhirkii fahmay sababta taleefankayga gacantu iigu oggolaanayo inaan u isticmaalo galoofyada shaashadda!
Jawaab ku sii Rocio Galan Pazos
WACAN AYAAN SAMEEYAY SHAQAYNAYDA (iyo)
Dinora Castillo dijo
Faahfaahintaadu aad ayey u cadahay, wiilkeygu wuxuu baranayaa naqshadeynta garaafka, waana inaan baaro waxyaabo badan oo ku saabsan xirfaddiisa, iyo nidaamyada hawlgalka ee uu ugu baahan yahay horumarintiisa tacliimeed, wax walbana waan u sameeyaa si aan ula qabsado oo aan u fahmo a in yar (: S) waxaad ka hadlayso iyo baahiyahaaga. Jidka, sharaxaaddaada sidoo kale waxay iga caawisay inaan waxbadan ka fahmo kiniinkeyga iyo taleefanka gacanta, waxaa jira horumaro aad u badan oo tikniyoolajiyadeed ah oo aanan waligey fahmi doonin, laakiin ugu yaraan ma noqon doono wax banaan oo ku saabsan. 😀
Waad ku mahadsan tahay kun maqaalkaaga. ; -)
Jawaab Dinora Castillo
Sidee buu u murugsan yahay walaal ……. laakiin sharaxaaddaadu waafiican tahay kuwa elektaroonigga ah .. .. laakiin dadka is-hoosaysiinta iyo kuwa fudud ..
mid awood leh ayaa kaliya aqrinaya farahaaga, ma aqrinayo cidiyaha ama qalinka ama wax kale…. waana ka fududahay uguna dhaqsiyaha badan in aad wax ka qabato adiga oo si tartiib ah u taabanaya shaashadda waana ka falcelisaa ………….
mid diidmo leh, waa inaad farahaaga ku jajabisaa shaashadda, taasoo adkeyneysa la qabashadeeda… ..sababtaa awgeed, qalin ama shay ayaa loo isticmaalaa isticmaalkiisa…. kumana adeegeyso sifiican ama lamid ah sida karti-qabe
WOW WAA CULIMAD AAD U MAHADSAN TAHAY INFO 😀
wax ku ool ah, waxtar aad u wanaagsan
Hector Rodriguez Ricco dijo
Xogtu way fiicneyd, ugu dambeyn waan fahmay waxa ku kala duwan labada
Jawaab Hector Rodriguez Ricco
Sharaxaad aad u wanaagsan, ayaa caddeeyay shakigeyga.
Aad baad ugu mahadsantahay saaxiib, macluumaad aad ufiican oo aad u cad ... iyo sida vampires ... mmmm laga yaabee inuu yahay mid taagan oo ka dhashay khilaaf soo saaray dhaqdhaqaaqa, wuxuu si uun uga qayb qaataa jiilka korantada lagama maarmaanka u ah isticmaalka taleefannada gacanta. ... 😉
Caqli badan! Maqaalkaagu waa mid aad wax u bartay. Mahadsanid!
Ku jawaab loli
Heer sare Aad u cadeeya sharaxaadda. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad go'aan gaarto markaad dooraneyso. Mahadsanid.
Pedro Abbel Erique S. dijo
Waad ku mahadsantahay macluumaadka oo aadan qofna ka caajisin gabi ahaanba, waxaan u maleynayaa, taa bedelkeeda, sharraxaadda oo aad u fudud oo dhameystiran. Mahadsanid
Jawaab Pedro Abbel Erique S.
Mahadsanid walaal !!! Aad baan u cad ahay d (^ _ ^ o)
Ku jawaab PhiRequiem
Wanaagsan !! Aad u cad
clarito clarito, aad u fiican, salaan iyo aad baad u mahadsan tahay
Henry Estupinan Ramirez dijo
Aad u cad mahadsanid. Waxaan hayaa taleefan Motorola V3, weligay kuma iibsan taleefan casri ah lacag la’aan, haddii aad haysato mid aan hadda waxtar kuu lahayn ku siiya, mahadsanidiin dhammaan.
Ku jawaab Henry Estupiñan Ramirez
Mr Matrix dijo
Waad salaaman tihiin, wax ku darsiga wanaagsan, waxaan su'aal ka qabaa, hadday yihiin shaashado awood leh, sidee ayey ugu shaqeeyaan muraayadaha indhaha? Micas sidoo kale karti ma leeyihiin?
Ujawaab Mr Matrix